नेपालमा संक्रमणले आज देखायो यस्तो सङ्केत : डब्ल्यूएचओ ले पनि दियो चेतावनी – Nep Stok
माघ १९, २०७८ बुधबार 281
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ३६३७ जना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बुधबारको प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा‍.संगीता कौशल मिश्राले दिएको जानकारी अनुसार पीसीआरबाट २२०५ र एन्टिजेन परीक्षणबाट १४३२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस अवधिमा ११ हजार ५८२ परीक्षण भएको छ ।यसमा पीसीआर परीक्षण ६ हजार ४९९ र एन्टिजेन परीक्षण ५ हजार ८३ भएको छ । २४ घण्टामा ७५५५ जना मुक्त भएका छन् । कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १२ छ ।
अहिलेको वृद्धिसँगै देशभरि भएका पुष्टि भएका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ६९,२९१ रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। केही दिनअघि देशभरि भएका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९० हजार नाघेको थियो। दैनिक पुष्टि हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको तथा पहिला फेला परेका सङ्क्रमित निको हुने क्रम बढेकाले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको हो।
“सङ्क्रमण दरमा कमी आए पनि उच्च जोखिम कायम रहेको” भन्दै डा. मिश्राले स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू पालना गर्न अनुरोध गरिन्। मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार अहिले काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लामा १,१२३ सङ्क्रमित फेला परेका छन्। अरू सङ्क्रमित विभिन्न जिल्लमा भेटिएका हुन्।
तीमध्ये ८६८ काठमाण्डू जिल्लाका, ८५ भक्तपुर जिल्ला र १७० ललितपुर जिल्लाका हुन्।अहिले काठमाण्डूमा मात्र ५०० भन्दा बढी सङ्क्रमित र दुई वटा जिल्लामा २०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन्। तर सामान्य लक्षण देखिएका मानिस नगएकाले सङ्क्रमितको सङ्ख्या सरकारी तथ्याङ्कभन्दा बढी भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा अहिले अतिसङ्क्रामक ओमिक्रोन भेरिअन्टका कारण सङ्क्रमण फैलिएको हो। चाँडै फैलिने भए पनि अधिकांश सङ्क्रमित व्यक्तिमा मध्यम खालका लक्षण देखिने गरेका छन्। प्रवक्ता मिश्राले भनिन्: “चौबिस नमुनाको जीन सिक्वेन्सिङ गर्दा २१ वटामा ओमिक्रोन र तीन वटामा डेल्टा भेरिअन्ट देखिएको छ।”
विगत २४ घण्टामा ६,४९९ पीसीआर र ५,०८३ एन्टिजन विधिबाट गरी कुल ११,५८३ वटा परीक्षण भएका थिए।तीमध्ये पीसीआर गरिएका र एन्टिजन विधिबाट गरिएका ३३.९ प्रतिशतमा सङ्क्रमण देखिएको हो। उक्त अवधिमा ७,५५५ जना सङ्क्रमितहरू निको भए भने कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित कारणले १२ जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
डब्ल्यूएचओ ले के भन्यो ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनका एक अधिकारीले कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको ‘सब भेरियन्ट’ नेपालसहितका मुलुकमा सक्रिय बन्न थालेको बताएका छन् ।
मंगलबार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को कोभिड प्रतिकार्य टोलीका सदस्य डा. बोरिस पाभलिनले अनलाइनमार्फत् ब्रिफिङ गर्दै ओमिक्रोनको ‘सब भेरियन्ट’ (सहप्रजाति) बीए.२ नेपालसहित कतार, भारत, फिलिपिन्स र डेनमार्कमा सक्रिय बन्न थालेको बताएका हुन् ।
डब्लुएचओको कोभिड-१९ रेस्पोन्स टिमका डा बोरिस पाभलिनले एक अनलाइन सम्बोधनका क्रममा खोपले ओमिक्रोनको विभिन्न स्वरुपमा पनि समान सुरक्षा प्रदान गर्ने बताए।
ओमिक्रोन भन्दा बीए.२ गम्भीर रहेको र चाँडो संक्रमण भइरहेको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहँदा डब्लुएचओले ओमिक्रोन भन्दा सहायक भाइरस बीए.२ थप गम्भीर नदेखिएको बताएको हो।
डेनमार्क लगायतका कतिपय देशमा ओमिक्रोनको बीए.२ सहायक भेरियन्टले बीए. १ भेरियन्टलाई प्रतिस्धापन गरिरहेको बताइएको छ।
‘डेनमार्कको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने बीए.२ ले बीए.१ लाई उछिनेको छ। तर रोगको भिन्नतामा कुनै गम्भीरता देखिएको छैन। यद्यपि बीए.२ ले विश्वव्यापी रूपमा बीए.१ ‍लाई प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना छ,’ पाभलिनले थपे।
उनले विभिन्न देशहरूमा बीए.२ बढिरहेको भए पनि अस्पतालमा भर्ना हुनेको संख्या बढी नरहेको उनले बताए।
बीए.२, बीए.१ भन्दा बढी सर्ने र खोप लगाएका मानिसहरूलाई पनि चाँडो सर्ने डेनिस अध्ययनले देखाएको छ। डिसेम्बर र जनवरीको बीचमा ८ हजार ५ सय भन्दा धेरै डेनिस परिवारहरूमा कोरोनाभाइरस संक्रमणको विश्लेषण गरिएको थियो।
‘ओमिक्रोनको सहायक भाइरस(बीए.२)ले फिलिपिन्स, नेपाल, कतार, भारत र डेनमार्कमा पहिले नै प्रभाव जमाएको छ’ पाभलिनले भने। विश्वका धेरै देशमा पछिल्लो समय ओमिक्रोनको सहायक भाइरस तिब्र गतिमा फैलिइरहेको जनाइएको छ।
Prev३ दिन मौसम निकै खराब असिनासहित वर्षाको हुने
Nextलासा ज्वरोका कारण कम्तीमा ३२ जनाको मृत्यु